Maraoka: Fitorevahana Nokarakaraina Hisarihana Ny Saina Mikasika Ny Zava-manjo Ireo Niharan’ny Fanolanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Marsa 2012 9:29 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Français, Italiano, 繁體中文, 简体中文, English
Nanao fitorevahana ry zareo Maraokana omaly (17 Martsa) ho fanoherana ny lahatra nozakain'i Amina Filali, 16 taona, izay namono tena taorian'ny nanerena azy hanambady ilay lehilahy nanolana azy. Neken'ny mpitsara ny fanambadian'i Amina sy ilay mpanolana azy. Niteraka tafiotram-panehoan-kevitra ny famonoany tea, tenyanivon'ny media sosialy sy teny an-kianja.
Niomana ny hanao ny fihetsiketsehany manoloana ny Parlemanta ry zareo Maraokana ny mitataovovonana, mba hisarihana ny saina amin'ny zava-manjo ny vehivavy toa an'i Amina izay terena hanambady ireo nanolana azy, ary dia afaka amin'ny fanenjehana /sazy araka izany koa.
Ny pejy Facebok ho fanohanana an'i Amina – niharan'ny fanolanana ary namono tena taorian'ny nanerena azy hanambady ilay nanolana azy
Pejy Facebook iray, mitondra ny anarana hoe Tsy ekena ny fanlanana, miaraka amin'ny tsikombakomban'ny fanjakana, no milaza hoe [ar]:
Ny Sabotsy 17 Martsa ny fihaonantsika, eo anoloan'ny Parlemanta, amin'ny mitataovovonana. Atao izany mba tsy hahafaty ny fahatsiarovana an'i Amina. Tsy avelantsika ho zava-poana ny fahafatesany. Angamba mba ho izy no farany amin'ireo ianjadian'ny zava-maharikoriko sy mahamenatra toy izany.
Ilay pejy dia manome ihany koa ny antsipirihany amin'izay hatao io Sabotsy io araka izao manaraka izao :
1. Toerana ifamotoanana ny manoloana ny Parlemanta amin'ny mitataovovonana. Tsy diabe io ka dia tsy hihetsika eo anoloan'ny Parlemanta isika.
2. Ny fitorevahana dia hetsiky ny olom-pirenena karakarain'ny tsy miankina, ho fantatra amin'ny alalan'ny T-shirt anaovany ry zareo (mbola hivatsy t-shirt koa ry zareo ho an'ireo izay te-hahazo izany).
3. Hisy sary vaventy sy taratasy kely misy ireo fangatahana (ireo fangatahana dia azo jerena ao amin'ny faritra mikasika ity pejy ity) hozaraina amin'ny mpadray anbjara. Azonareo atao koa ny mitondra ny famantarana anareo raha tianareo izany
4. Handray anjara amin'izany ireo vondrom-piarahamonina sivily manana ny toerany, ONG sy mpanakanto maro.
Tolontsika rehetra io, isika rehetra, lahy sy vavy eto Maraoka, koa tongava!
Mandritra izany, ireo mpiondana aterineto dia manohy maneho hevitra amin'ny tantaran'i Amina. Rafik Ayoub, avy ao Rabat mibilaogy hoe [ar]:
Androany ny tantaran'i Amina dia lasa tlon'ny Maraokana rehetra ary voninahitry ny olom-pirenena rehetra izay manonofy ny hipetrahan'ny demaokrasia tna izy ary ny rariny ara-tsosialy. Azo lazaina ho toa tsy azo atao mihitsy ny miresaka famolavolana lalam-panorenana tena mety raha tsy mitady ny rariny ho an'i Amina sy ny fianakaviany, ary mandrana mamerina ny maha-olona azy izay nohosihosena tanaty fasika. Tsy ampy ahy ireo fanomezan-toky miverimberina hoe hanova ny rafi-pitsaràna, sy hiantoka ny fahaleovantenany, nefa tsy misy fanovàna ireo toko sy andininy amin'ireo Lalàna momba ny heloka bevava, izay manjary loharanon'ny tohana ho an'ireo nanao ny tsy rariny manoloana ireo niharan'izany.